अन्तिम चरणकाे प्रबुद्ध समूहको बैठक किन सर्यो, यस्तो थियो भारतको चाहना ! || सुनौलो नेपाल
अन्तिम चरणकाे प्रबुद्ध समूहको बैठक किन सर्यो, यस्तो थियो भारतको चाहना !
काठमाडौँ । यही जेठ २८ र २९ गते बस्ने भनिएकाे नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहकाे बैठक अन्तिम चरणमा अाएर सरेकाे छ । दुर्इ देशबीच विवादित विषयबारे समग्र पक्षको अध्ययन गरी भावी सम्बन्धको स्वरुप निर्धारण गर्न गठित समूहको बैठक भारतीय चाहनामै सारिएकाे बताइन्छ ।
समूहको निर्धारित अन्तिम का लागि नेपाली पक्षबाट अन्तिम तयारी भइरहेकाे थियाे । तर अचानक भारतीय पक्षको आग्रहमा उक्त बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको काठमाडौँस्थित समूहको सचिवालयले जानकारी दिएकाे छ।
दुवै देशका सरकारद्वारा गठित समूहकाे म्याद अाउँदाे असार २० मा समाप्त हुँदैछ । त्यस अघि नै समूहले सिफारिस दिन नसकेमा झण्डै २ वर्षको अभ्यास खेर जाने अवस्था समेत उत्पन्न हुनेछ । जेठ २८–२९ को बैठकले दुई पक्षका समूहबिच आदानप्रदान भएको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने बेलामा अनिश्चत कालका लागि बैठक स्थगित हुँदा थप अाशंका र अन्याैल सृजना भएकाे समूहका एक सदस्यले बताए ।